Al-shabaab Oo Looga Baaqey Kordhinta Weerarada Soomaaliya - Awdinle Online
Al-shabaab Oo Looga Baaqey Kordhinta Weerarada Soomaaliya
April 16, 2020 (Awdinle Online) –Ururada argagixisada caalamiga ah ee ISIS iyo Alqaacida ayaa ka codsaday xubnahooda iyo kuwa ku xiran ee daafaha dunida in ay ka faa’iidaystaan dhibaatada caafimaad ee dunida ka jirta si ay weeraro uga geystaan dalalka ay ku sugan yihiin.
Al Qaacida iyo ISIS waxay u sheegeen taageerayaashooda inay haystaan fursado ku qabsadaan dhulal kuna weeraraan waxay ugu yeereen cadawgooda maadaama ay ku mashquulsan yihiin masiibada la tacaalida Coronavirus.
Warbixin lagu daabacay bog ka faallooda xogaha ururada argigixxisada ayaa lagu sheegay in kooxda Al-shabaab ay kamid tahay ururada katirsan Alqaacida ee loogu baaqay inay kordhiso weerarada ay ka wado gudaha Soomaaliya iyo Kenya.
Hase yeeshee, Waxay warbixintu sheegaysaa in weerarada dhulka iyo duqeynta dhanka cirka ah ee ciidamada huwanta ah ku hayaan Al-shabaab ay si tartiib tartiib ah u cuuryaamisay awoodda kooxda u leedahay inay qaado weeraro ballaaran.
Warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in Al-shabaab taageero ka dalbatay Alqaacida si ay horumariso ajandeheeda inta lagu jiro masiibada Coronavirus. Waxa ay hogaamiyayaasha Alqaacida la wadaagtay ficillo muuqaal ah oo ku saabsan howlgallada ay ka wado gudaha Soomaaliya.
Muhiimad ahaan, Al Qaacida waxay u muuqataa inay ku hawlan tahay olole si ay u sii kordhiso awooda ay ku leedahay gudaha Afrika iyo Bariga Dhexe, gaar ahaan Afghanistan iyo Soomaaliya.
Previous articleMacaadintii laga dhoofin jiray deegaanada Puntland oo amar Laga soo saaray
Next articleCali Caraale oo xilkii ku wareejiyey Guddoomiyaha Cusub ee Gobolka Hiiraan Cali Jeyte